Ruramisiro ▷ ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Balance zviyero kutsigira chokwadi uye kushandira yepamusoro soro.
Zvinoreva tarot kadhi «Ruramisiro»
La Tarot kadhi reRuramisiro rine chekuita nekunzwisisa kwetsika uye chii chinopa kunzwira tsitsi, tsitsi uye pfungwa yeruramisiro. Kubva panguva yaSoromoni, chifananidzo ichi chakamiririra chiyero chekubata zvinehunhu uye nekuenzanisira kwezvimwe zvinhu.
Kazhinji kusanganisira mufananidzo wedanho kana manera ayo anobatsira kuenzanisa iyo zvinodiwa zvinokwikwidza zvinopesana nezvakanaka zvese, uye bakatwa rinocheka nekwose ku inomiririra iwo maratidziro anodikanwa kuti utonge zvakajeka, kadhi iri rinotiyeuchidza kuti tingwarire neakakosha madhata. Iko kukanganisa kukanganwa kana kurerutsa chimwe chinhu kana zvasvika pakadhi rino. Mutemo wekarma unomiririrwa pano - izvo zvinotenderera zvinouya zvichitenderera.
Iwe unoonekwa sebato risingasaruri rine maonero rinokosha.
Kadhi reJustice rinokukurudzira kuti unyatsoteerera nepo vamwe vachitsanangura yavo vhezheni yezviitiko uye nemabatiro avakaita. Haufanire kupa mhinduro. Basa rako ndere kucherechedza, nyatsoteerera, nyatsoteerera uye chengeta njere dzako apo nyaya inotora chimiro.
Sezvo iwe uchipupurira nhoroondo dzevanhu pachavo, kunzwisisa kwako kunopfuura mazwi aunonzwa. Kufungidzira kusinga tsanangurike uye zvinongedzo zvicharatidza chokwadi icho chinokutendera iwe kuti uite muyedzo wakangwara uye wakarurama.